Ngiyaziqhenya ngengane yakwethu: UMntwana uThembi - Bayede News
by nguThulani Mbatha
Singomunye wabaholi abaqavile nababeke induku ebandla e-Afrika kuleli khulunyaka, kodwa ekukhuleni kwaso ISILO akukaze kube nezimpawu zokuthi lona oyiNkosana kaZulu angaba luphawu lokubuyisana, uxolo nokuzigqaja esizweni. UThulani Mbatha uxoxe nowakwabo uMntwana uThembi ngalo mholi.
ISILO singena ehholo ligcwele osolwazi, ongoti, izifundiswa zamazwe, abaholi kuhulumeni namakhosi basukume bonke kuhle kwekwaya lomculo lilandela umbhidisi. Bude buduze nalabo abaphahle iMbube, inyosi ilokhu igedezile kuswace isimo endlini, umuzwa kanoma ubani uzwakala esikhumbeni ukuthi lona ongena lapha ungohlukile.
Lesi yisigqi iNgonyama, kule nyanga ehlanganisa iminyaka engama-65 idla anhlamvana, enyathela ngaso nesehluke kakhulu endleleni eyihambile ebuncaneni ngaphambi kokubekwa eSihlalweni. Akekho ongachaza le ndlela kangcono ukudlula owakwabo, uMntwana uThembi, othi uke abe neziwombe lapho ezizwa eziqhenya kakhulu ngenyathuko esihanjwe yiSilo.
“Akuyena umuntu owaba nempilo elula ekukhuleni kwakhe njengoba wayengahlali noyise futhi eqhelile nasezinganeni zakwabo,” kuchaza uMntwana uThembi.
ISilo uZwelithini siyiNkosana yeNgonyama uBhekuzulu eNdlovukazini uNdwandwe, kodwa ekukhuleni kwaso sihlale eSigodlweni kwaDlamahlahla yize abakwabo bebeKwakhethomthandayo.
“Ngingathi nje impilo yakhe ebufaneni wawungaphika ukuthi ingane yenkosi, kodwa kwakungakhulunywa ngale ndaba futhi nathi abakwabo singazicabangi lezo zinto zokuthi uzalwa yiSILO,” kuqhuba uMntwana uThembi.
“Kodwa-ke nxa sesibheka emuva manje kuyacaca ukuthi konke okwakwenzeka empathweni yakhe kwakungamasu asetshenziswa yiSILO esasibusa ngaleso sikhathi ukuthi abone ubunzima bempilo ukuze akhule abe ngumholi onganyakaziseki kalula.
Elandisa ngesinye sezibonelo zobunzima boMntwana uZwelithini esakhula encwadini ethi “King of Goodwill”, uMntwana uNonhlanhla (ongasekho), uthi emalini yomfundaze awuthola esesesikoleni wayonga enye ukuze athengele umnewabo amakhokho ebhola.
UMntwana uNonhlanhla ngomunye wabaseNdlunkulu owaba neqhaza elikhulu ekuqinisekiseni ukuthi iSilo sithatha iSihlalo ngemuva kokukhothama kweNgonyama uBhekuzulu.
Lokhu kuyavela ezibongweni zeSilo lapho kuthiwa:
Eya kwadadewab’ uNonhlanhla
Enike nabon’ iZinyane
Lesi sigaba siqukethe cishe esinye seziqubu zosizi olwathwalwa yiSilo ekukhuleni kwaso, ngokusho kukaMntwana uThembi.
“Kungaleyo minyaka lapho azithola esesebenza esitolo sikaNdunankulu wakwaNdebele esebenzisa igama okungelona elakhe ngoba wayebalekiselwe izinsolo zemizamo yokubulawa kwaNongoma.
UMntwana uNonhlanhla wendela kwaNdebele. “Sasisondelene sikhula naye kangangokuthi kwathi esafunda eBhekuzulu nami ngibuya eboarding school lapho ngangifunda khona kuzoba yihlambo leSilo ngathola ukuthi akekho angangaphatheka kahle. Ngachazelwa ukuthi kufike udadewethu (uMntwana uNonhlanhla) wamthatha wahamba naye ngoba kwesatshelwa ukuthi angase alinyazwe.
“Uma sizwa amahlebenzi ayethi angase alinyazwe ngesikhathi kuphume inqina eyayihambisana nalo ihlambo. Wayohlala kwaNdebele ecashile – negama lakhe wayengalisebenzisi ebizwa ngoPercy Dlamini futhi esebenza esitolo sikaNdunankulu wakwaNdebele ngaleso sikhathi uSikhosana ediliva amasaka,” kulanda uMntwana uThembi.
Indaba yokuhlotshaniswa namanye amagama cishe kwase kuyinto eyejwayelekile kuMntwana uZwelithini ngoba, ngokusho kukaMntwana uThembi, nangesikhathi eseSigodlweni kwaDlamahlahla kwakuyinto emukelekile ukuthi ngowakwaNtombela bona bebizwa ngabakwaMchunu KwaKhetha futhi kwakuyinqubo eyayejwayelekile lena emazinyaneni eSilo.
“Nasesikoleni imbala besithi uma sinikwa umlayezo wokufunekayo sifike siwudlulisele kuye ubaba uMchunu hhayi eSilweni futhi silalela lokho esikutshelwayo singabuzi ukuthi kungani sibizwe ngabakwaMchunu yize sasazi ukuthi sizalwa ngubani.”
Ukuziqhenya ngosekwenziwe yiSilo kule minyaka “esiyiphiwe”, uMntwana uThembi ukuncikisa ezintweni nasezigigabeni eziningi azibukela eduze empilweni yaso.
“Ushintshashintshile ngokuguquka kwezikhathi nezigaba empilweni yakhe. Kuke kwaba nesithuba lapho ububona ukuthi impilo engenyinhle ebuncaneni bakhe yaba nomthelela wokuthi kube nezinto ezingamphathi kahle kodwa kuthe ngokukhula wabona ukuthi ubuyela esimweni sokuba noxolo wasondela kakhulu nasezintweni zesonto.
“Ungumuntu oba nakho ukucasuka bese exola masisha futhi, enjalo nje uyaphana kakhulu emndenini. Ngesinye isikhathi sake saze saba novalo ngokuthi kuzophela imfuyo ehlabisa noma ngubani ofika eSigodlweni. Akakhethi ukuthi upha bani.
“Okuyikhona engiye ngithi noma ngiphakathi kwabantu noma eNdlunkulu ngizizwe ngiziqhenya ngakho eSilweni wubuholi esibukhombisile njengoba siseSihlalweni. Waqala ngokubiza yonke indlu yobukhosi ebahlanganisa ezokhuluma nabo mayelana nokuthelelana amanzi nobumbano. Sasingakaze siyibone into enje ngoba phela ipolitiki yayisihlakaze wonke umuntu ebukhosini. Emva kwalokho wahlanganisa amakhosi esifundazwe wakhuluma phakathi kwawo njengenkosi neNkosana yawo. Kwaba yigalelo elikhulu leli ngoba ukukhuluma uxolo nobumbano wakuqala endlini wabe esekhipha umlayezo ofanayo nasesizweni.”
Yize uMntwana uThembi ethi bake babenalo ithuba lasegcekeni lapho becushisana khona neNgonyama, kodwa uthi amagalelo amaningi ayo asuka ebuhlakanini bayo.
“Ukuvuselela uMkhosi woMhlanga nje ngenye yezigaba eziyohlala njalo emlandweni ngoba lesi sinyathelo asivuselelanga izintombi zakwaZulu kuphela, kodwa nabangekho esizweni bavuselelekile ngokubuka okwenziwa kwelakithi. Lapha eMhlangeni sihlanganyela nezizwe ezahlukene njengamaSwazi, amaNdebele nabanye abagcina sebeziqhenya ngabayikho ngoba bebukele kwaZulu.
“UMkhosi wokweShwama ngenye yezinto evuselelwe yiSilo evusa umhlwenga kuZulu. Siphinde senza umkhosi wenhlambuluko nokuthelelana amanzi kulabo ababenyathelene amakhona ngezizathu ezahlukene esizweni, phakathi kwazo okukhona ipolitiki. Lokhu engikubalayo kuyaveza ukuthi ubuholi baso buqhakambisa ukuziqhenya ngobuzwe bakho, bukhuthaze ubumbano noxolo phakathi kwabantu nezizwe.”
nguThulani Mbatha Jul 27, 2020